Mifamatotra Indray Amin’ireo Vondrom-piarahamonina Niaviany Ireo Mpianatra Ao Amin’ny Anjerimanontolon’ny Teratany Aymara Ao Bolivia · Global Voices teny Malagasy
Mifamatotra Indray Amin'ireo Vondrom-piarahamonina Niaviany Ireo Mpianatra Ao Amin'ny Anjerimanontolon'ny Teratany Aymara Ao Bolivia
Voadika ny 09 Aogositra 2015 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Deutsch, Español, Aymara, Español, Português, English, عربي, English
Atrikasan'ny olon-tsotra mpanao gazety tao Unibol. Sary nomen'ny La Pública maimaimpoana.
Manintona ireo mpianatra manerana ny Altiplano Boliviàna, izay mikatsaka hoavy tsaratsara kokoa sy fomba hamaliana babena ny fiarahamonina niaviany, ny Anjerimanontolon'ny Teratany Aymara ao Bolivia “Túpac Katari” (Unibol). Nomena ny anaran'ilay lehiben'ny mpikomy teratany tamin'ny taonjato faha 18 , noforonin'ny governemanta Boliviàna ny taona 2008 ilay anjerimanontolo mba ho fomba hitazonana ireo fahalalàna nentimpaharazana sy hanomezana fahafahana hianarana ireo sehatra izay mety hanampy eo amin'ny fampandrosoana ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitr'ireo mpianatra. Misy mpianatra voasoratra anarana miisa eo amin'ny 950 isa eo ho eo, afaka misafidy amin'ireo sampam-pianarana maromaro ireo mpianatra, tafiditra amin'izany ny sampana fianarana ny fambolena Altiplano, ny fianarana ny fanodinana sakafo, ny fianarana ny tenona, ary ny siansa momba ny fitsaboana biby.
Ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Cuyahuani, akaikin'ny Farihy Titicaca, no misy azy, miha mahita fivelarana hatrany ilay anjerimanontolo amin'ny fanamboarana efitrano fianarana vaovao sy toerana fonenan'ireo mpianatra. Miaina ao amin'ny faritry ny toeram-pianarana, amin'ny vatsim-pianarana feno, ireo mpianatra, tafiditra amin'izany ny saram-pianarana, efitra fandriana sy sakafo, ary ireo fandaniana hafa mifandraika amin'izany. Na izany aza, mafy ny fifaninanana, ary tsy maintsy miatrika fanadinana fidirana ireo mpianatra vao hiditra aty aoriana. Isan'ny zavatra iray tsy maintsy takiana amin'ireo mpianatra ny fahaizana miteny ny fiteny Aymara, satria ampianarina amin'izany fiteny izany no atao ny ankamaroan'ny fampianarana. Maro ihany koa ireo fikambanana eny ambanivohitra no manome ny fanampiany ireo mpianatra hiditra sy voaray, amin'ny fametrahana io fifanarahana eo amin'ny roa tonta io.
Mabel Franco, mpandrindra ny tetikasa La Pública, milazalaza ny mombamomba ireo mpianatra amin'ny ankapobeny ary manazava ny antony ilàna io karazana anjerimanontolo io :
Misy hitovizana be ny tantaran'ireo mpianatra: avy amin'ireo tokantrano miaina ao anatin'ny fahantrana lalina, taom-pianarana vita tao anatin'ny fihafiana goavana, ary tebiteby rehefa tonga ny fotoana hijerena ny valim-panadinana hidirana amin'ny anjerimanontolo. Mametraka ho anjorom-bala ny ankamaroan'ireny Boliviàna ireny ny fanofànana arak'asa nentimpaharazana, izay arahan'ireo sekoly vitsy tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy any ambanivohitra. Voaporofon'ny tàha ambanin'ny fanekena ny fidirany amin'ny fanadinana fidirana io: 11 amin'ireo 260 ihany no mahazo vatsim-pianarana amin'io fomba io (raha oharina amin'ireo fianarana manomana mialoha ny kilasy ambony izay manana tàham-pahafahana 80%).
Mpikambana amin'ny ekipan'ny Jaqi Aru. Sary nomen'ny La Pública maimaimpoana.
Namorona tetikasa fanaovan-gazetin'olon-tsotra mba hihainoana ireo feon'ireny mpianatra ireny, izay te-hizara ny tantarany, ny fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny Unibol, La Pública, ary ny Jaqi Aru (fikambanana eo an-toerana izay manindrahindra ny fampiasàna ny fiteny Aymara ao amin'ny Aterineto). Amin'ireo atrikasa, mianatra ny maneho hevitra irery ireo mpianatra ary mandefa ireo tantarany ao amin'ny vohikalan'ny La Pública. Raha mbola miahotra ny hanoratra amin'ny fiteniny ireo mpianatra maro miteny Aymara, ny sasany kosa efa manandrana manao izany miaraka amin'ny fanampian'ny ekipa Jaqi Aru. Maro amin'ireo lahatsoratry ny bilaogy no voasoratra amin'ny teny Espaniôla ary avy eo adika amin'ny teny Aymara. Ho an'ireo lahatsoratra ho avy, ho asandratray kokoa aloha ireo lahatsoratra ao amin'ny bilaogy nosoratana voalohany tamin'ny teny Aymara, ary avy eo vao adika amin'ny teny Espaniôla.
Ireto ny sasany amin'ireo lahatsoratra voalohany tao amin'ny bilaogy avy amin'ny tetikasa Feon'ny Aymara, izay mikatsaka ny hanangona ireo zavatra iainana “ara-tsosialy, ara-tontolo iainana, ny ara-koltoraly sy sosialy, ny ara-teknolojia, sy ara-pianarana ary haneho ny fiainana andavanandron'ireo mpianatra sy ireo vondrom-piarahamonina.”
Tsy moramora mandrakariva ny làlana mitondra mankany amin'ny anjerimanontolo, fa ho an'i Delia Mamani Callisaya, mpianatra ao amin'ny sampana fambolena, taorian'ireo fanamby maromaro tsy maintsy natrehany, efa mahatsapa ho toy ny any an-trano izy ankehitriny. Milazalaza ny fihaonana voalohany fampahafantarana natao ny taona 2010 izy, izay nanombohany niaraka tamin'ireo mpiara-mianatra miisa 63 nahalàla ny mombamomba ilay anjerimanontolo ary ny zava-tsoa afaka omeny. Avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Guaqui izy, milaza ireo fihetseham-pony:
Mirehareha amin'ny maha-anisan'ny ao amin'io fianarana io aho, izay nandroso be mihoatra ny nieritreretan'ny maro taminay azy. Mino aho fa miavaka amin'ireo anjerimanintolo hafa manerana ny firenena ny anjerimanontoloko, tsy hoe manambany ireo anjerimanontolo hafa aho akory. Ohatra, tena madio sy marina ny finamànana izay mampiray ireo mpianatra, mihoatra noho ny finamànana mihitsy, tena fifampitondrana toy ny mpirahalahy sy mpirahavavy. Miaraka foana izahay isan'andro, mifankahafantatra ny tsirairay ary mifanampy toy ny mpianakavy. Raha misy mpiara-mianatra marary na manana olana amin'ny fianarany, mifanohana izahay, amin'izay tsy kivy izy ireo ka afaka mandroso hatrany amin'ny fianarany. Manampy anay hitazona ireo maha-izahay anay ny fiainana ao amin'ny toeram-pianarana, izay araka ny eritreritro, very eo amin'ireo tanora.
Lavitra ihany koa ny làlan'i Abidan Triguero Calle nankany amin'ilay anjerimanontolo, saingy mahaleo ny sarany anefa izany. Avy amin'ny vondrom-piarahamonina Altiplano izy, nanomboka nianatra tao La Paz izy. Nitady ny mety fianarana afaka ataony tao amin'ny tanànan'i Cochabamba izy, nefa tena lafo be ny saram-pianarana amin'ny anjerimanontolo tsy miankina. Avy eo izy nahare ny zava-tsoa ao amin'ny Unibol ary dia tena izany mihitsy ny zavatra notadiaviny. Mianatra momba ny fanodinana sakafo izy ankehitriny, izay hanampy ny vondrom-piarahamonina misy azy. Manoratra ny enim-bolana voalohany nianarany tao amin'ny Unibol izy, sy ny fomba nanovàn'izy io ny fahitàny ny hoaviny:
Ny tena marina, tonga fotsiny aho nijery ny endrikendrik'ity toerana ity. Nijanona ho an'ny enim-bolana voalohany aho ary nianatra toy ny fomba fijerin'ny Aymara rehetra, ary ankehitriny, afaka milaza aho fa tena mamaritra kokoa ny tenako avy amin'ny toerana nahaterahako aho. Aymara teraka tany amin'ny faritany Ingavi aho, monisipalin'i Jesús de Machaca, vondrom-piarahamonin'ny Lahuacollo. Nanova ny fomba fijeriko ito anjerimanontolo ito, ary ankehitriny aho mahatsapa ho tafaraikitra tanteraka amin'i Bolivia.
Mahereza mihaino hatrany mba hahita ireo tantara misimisy kokoa an'ireo mpianatry ny Unibol, izay manoratra momba ireo fanamby natrehany sy ny fahombiazan'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra misy azy ireo.